Ciyaaraha Tokyo : Waa tumaa gabadhii u awood sheegatay Ramla Cali? | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Ciyaaraha Tokyo : Waa tumaa gabadhii u awood sheegatay Ramla Cali?
Maria Claudia Nechita waa gabadha tartankaf eerka kaga awood roonaatay oRamla Cali oo Soomaaliya ku mataleysa tartanka feerka ee ciyaaraha Olimbikada Tokyo 2020.
Maria Claudia waxay u dhalatay dalka Romania, waxay ku biirtay ciyaaraha feerka markii 13 sano jir aheyd.
Maria Claudia Nechita waxay dhalatay 15 bishii August ee sanaddii 1993, waana 27 jir.
Tababaraha Maria ayaa waxaa lagu magacaabaa Adrian Lacatus.
Barta ay instagram-ka ku leedahay ayaa waxaa ugu qoran erayo dhiirigalin ah”raac riyadaada waad gaareysaa meeshaad higsanayso”
Qaabkii ay ugu soo biirtay xirfadda feerka
Ka hor inta aysan ku biirin feerka waxay dheeli jirtay kubadda cagta.
Waxaan arkay gabdho feertamaya xilligii aan ku jirnay dugsiga sare laakiin xilligaa ma anan ogeyn waxa uu feerku yahay, ayay tiri Maria sida ku qoran bogga olambikada ee Tokyo.
“Maria ayaa sidoo kale sheegtay in markii ay bilaabaysay ciyaarta feerta aysan fikir badan ka haysan waxyaabaha ay tahay inay cuno ama ay sameyso,” ayay tiri
“Ma anan aqoon wax aan cuno si aan u feertamo, waxbo kama aanan aqoon ciyaaraha caalamiga ah ee olambikada amaba horyaalka Yurub,” ayay tiri Maria Claudia.
Maria Claudia Nechita waxay sheegtay in ay doonayso in ciyaaraha feerka dumarka ay ka dhigto kuwa ka caansan sida ay hadda yihiin.
“Waxay noqotay qeyb noolasheyda ka mdi ah Waan ogahay in feerku yahay ciyaar aad caan u ah oo aad loo yaqaano laakiin waxaan rajeynayaa inaan caan ka sii dhigo,” ayay tiri.
Maria Claudia Nechita waxay horey uga qeyb gashay tartan badan oo dhanka feerka ah sida tartanka horyaalada Yurub.
Nechita ayaa guusheedii ugu horeysay u soo hoyisay dalkeeda Romanian tartankii olambikada ee feerka ee la qabtay sanaddii 2020.
Feeryahanada reer Romania ee Maria Claudia Nechita ayaa imika u gudubtay rubuc dhammaadka tartanka feerka gabdhaha ee miisaankiisu yahay 54-57 kg ka dib guushii ay shalay ka gaartay tartankii ay la gashay Ramla Cali.
Waa Tuma Ramla Cali ?
Gabadhii ugu horreeyey ee Soomaaliya uga qayb galaysa ciyaaraha feerka ee Olombikada
Previous articleXuseen Nuuriyow ” Reer Norwey wixii ay uga baahdaan gobolka Banaadir aniga ayaa ka caawinaya“
Next articleMUUQAAL :- Booliska Germany oo dhaawacay wiil Soomaali ah oo weerar ka geystay dalkaasi.